Tamin`ny taona 2019, dia niisa 800 ireo fitarainana voaray momba ny orinasa JIRAMA raha ny nambaran` i Rakotorova Rabetsara dit Lita, filohan` ny fikambanana miaro ny zon` ny mpanjifa (Réseau National de Défense des Consommateurs) Maro ireo mpanjifa no mitaraina amin` ny fidanganan` ny faktiorany raha oharina amin` ny filany mahazatra. Eo koa ireo mitaraina momba ny dingana arahaina amin`ny fangatahana « compteur ». Misy mpanjifa efa an-taonany maro no nametraka izay fangatahana izay no mbola tsy nivaly kanefa misy ny sasany vetivety dia mahazo “compteur”.
Fitaovana tsy tomombana
Eo ihany koa ny fitarainana momba ny tsy fahatomombanana eo amin` ny fitsinjirana ny herinaratra sy ny rano. Maherin` ny 120 kosa ireo fitarainana mahakasika ny fitaovana fandanjàna (instruments de mesure) sandoka. Misy ireo kapoakam-bary ampiasaina no manana “double fond”. Misy ireo “balance” no hosoka. Mitobaka hatrany ny fitarainana momba ireo entana lany andro. Any amin` ny faritany, maro ireo fitarainana amin` ireo “yaourt” lany daty mameno vata fampangatsihana fa efa nopotehina avokoa, hoy hatrany ny fanazavana. Isan’ireo asa lehibe tsy maintsy iantsorohan` ny Ministera ny fiarovana ny mpanjifa amin’ny alàlan’ny sampan-draharaha miaro izany ary ny roa tonta dia tokony hiara-hiasa amin’ny fiarovana ny vahoaka amin’ny fiantsenana ataony sy hanentanana azy ireo hanasongadina ny vokatra eto an-toerana ary am-pireharehana amin’ny marika « Malagasy_Ny_Antsika ».